" Dream to BecomeaDoctor : A Practicality oraPassion ? " စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
Home Uncategorized ” Dream to BecomeaDoctor : A Practicality oraPassion...
” Dream to BecomeaDoctor : A Practicality oraPassion ? ” စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီး
ဆေးတက္ကသိုလ်မန္တလေး၏ ၅၂ ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကိုကြိုဆိုသောအားဖြင့် ကျောင်းသားဟောင်းများအသင်း UMMAA မှကြီးမှူးကျင်းပသော Panel Discussion စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကို ယနေ့ နေ့လည် ၁နာရီမှ ၃နာရီအချိန် အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပါမောက္ခချုပ် ၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ၊ ပါမောက္ခဌာနမှူးများ ၊ ကျောင်းသားဟောင်း ဆရာဝန်များ၊ မကြာမီ ဘွဲ့ယူကြမည့် ဆရာဝန်သစ်လွင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသော အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည် ။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် moderator အဖြစ် ဒေါက်တာခင်မောင်ကျော် ကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည် ။ ပထမဦးစွာ သစ်လွင်ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရင်ငြိမ်းအေးနှင့် ဒေါက်တာပိုင်ဖြိုးသန့်တို့က မိမိတို့ ၏ငယ်စဥ်ဘဝအိပ်မက်နှင့် အနာဂါတ် လျှောက်လှမ်းကြမည့် ရည်မှန်းချက်အသီးသီးကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တင်ပြကြသည် ။
သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များတွင် အောင်မြင်နေသောဆရာများဖြစ်သည့် ဆရာ ဒေါက်တာ မောင်မောင်ဦး၊ ဒေါက်တာမြသန်းနှင့် ဒေါက်တာ ကျော်မျိုးတို့ကလည်း ၎င်းတို့၏ ငယ်စဥ်ဘဝအိပ်မက်နှင့် တကယ့် လက်တွေ့ဘဝခြားနားကြပုံ ၊ လက်ရှိလျှောက်လှမ်းနေကြသော career များ နှင့်ပတ်သတ်ပြီး တွေ့ကြုံခဲ့ရသော အခက်အခဲ ၊ အခွင့်အလမ်းများ ကို ပြန်ပြောင်းပြောပြကြရာ ဘွဲ့ယူမောင်မယ်များ အတွက် အလွန်တရာ တန်ဖိုးရှိသော ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည် ။
ပွဲအပြီး၌ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်နှင့် ပရိသတ်များကလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ စင်ပေါ်နှင့် စင်အောက် မြိုင်ဆိုင်အသက်ဝင်ခဲ့သော ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည် ။
အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြသူများ ၊ တက်ရောက်ပေးကြသူများ၊ အဘက်ဘက်မှပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ကြသူများနှင့် ကော်ဖီ sponsor ပေးသော Nescafe ၊ မုန့်နှင့်ရေသန့် ပါဝင်ကူညီပေးသော ကျောင်းသားဟောင်း ဒေါက်တာသိန်းထွန်း တို့အား UMMAA မှ အထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည် ။
< အခမ်းအနားမတက်လိုက်ရသူများအတွက် video file ကို University of Medicine Mandalay facebook page နှင့် UMMAA facebook page များ၌ မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါ၍ စောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ကြပါသည် >